हेल्थ एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन - स्वास्थ्य - प्रकाशितः श्रावण २, २०७६ - नारी
फाउन्डेसनले २० शय्याको अस्पताल निर्माण गरी अनमी, नर्सिङ तथा रेडियोलोजीसम्बन्धी अध्यापन गराउनुका साथै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न अझियान संचालन गर्ने डा. केसीले बताएका छन् ।
यसका साथै त्यहाँ मधुमेह, महिला सशक्तीकरण, रत्तअल्पतासम्बन्धी अनुसन्धान गरिने योजना पनि छ ।
गाउँमा उचित स्वास्थ्य उपचारको अभावमा क्षय रोगबाट आमा तथा हर्ट एट्याकबाट बुवाको मृत्यु भएकाले फाउन्डेसन स्थापना गर्न प्रेरणा मिलेको डा. केसीले बताए ।
पुस १, २०७६ - एकीकृत बस्तीको अवधारणा
कार्तिक ४, २०७६ - मिस्टर एन्ड मिस ब्लाइन्ड